बिचार-ब्लग | Matrisandesh | Page 2
खाद्य बाली वा तिनका फसललाई रोग तथा किराको प्रकोप हुनबाट बचाउने नियतले प्रयोग हुने पदार्थ लाई विषादी भनिन्छ । हाल संसारमा १००० भन्दा बढी कीटनाशक विषादी वा पेस्टीसाईड…
तरकारीमा पनि सरकारसँग रोईलो गर्ने ठाउँमा हामी किन पुग्यौं ?
बिनोद खड्का,काठमाडौं ।
-केही दिन यताबाट तरकारीले नेपाली बजारमा हलचल नै लियाईदिएको छ,त्यसको कारण पनि नेपाल सरकार नै हो । किनकि यहीँ असारको पहिलो हप्ता बाट भारत…
केहि दिन अघि स्थानीय समाचारमा मन्थली नं पा भित्र करौडौको लगानीमा सुबिधा सम्पन्न पौडी पोखरी बन्ने समाचार पढ्न पॉए कताकता मनमा शीतलता पनि छायो। फेरि त्यहि न.पा…
माहौल विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस संसार चरका पत्रकार र पत्रकारिता संग संवद्ध संगठनहरुले मनाई थकाई मार्दैको । निरन्तर पैरवि र व्यापक आन्दोलन पश्चात पत्रकार जितेन्द्र…
एनआरएनएले निर्माण गरेको गोरखाको लाप्राक बस्तीमा पुग्दा मैंले जे देखे
-जापानबाट केहि समयको लागि नेपाल बसाइको लागि आएको थिए । त्यही बसाईको सिलसिलामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सहयोगमा बस्ती बसाल्न थालीएको लाप्राक पुग्ने अवसर मिल्यो ।…
जापानमा नेपाली पत्रकारिता : विगत र वर्तमान
शान्त पहरी ।
-समयमा दुःख गरे उमेर ढल्केपछी सुखको जीवन जिउन सकिन्छ भनेर समृद्ध नेपालको सपना बोकेको लाखौ युवाहरूले गह भरि आँसू र मन भरि आस बोकेर नेपाल छोड़नु…
-युवाको सहभागिताविना राष्ट्रिय युवा परिषद् सम्भव छैन । कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३५ प्रतिशत युवा भएको यो जानसांख्यिक लाभको समय हो । हामीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।…
जापान जस्तो कहिले उपभोक्तामुखी बन्ने नेपाल ?
नन्द गुरुङ ।
-हरेक व्यक्ति उपभोक्ता हो । प्राकृतिक हुन् या कृतिम सामानहरु वा चिजवस्तुहरु मानव जातिले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उपभोग गरिरहेका हुन्छन् ।
वातावरणमा पाइने प्राकृतिक सजिव वा…
-राजनीतिमा चासो राख्नै पर्दैन । देशको ख्याल गरे पुग्छ । बाहिरियो सिके राउतको यस्तो घिनलाग्दो बेवार ब्यवहार देशलाई सिक्किमिकरण गर्ने खुलासा केपि र प्रचण्डले…
-नेपाली राजनीतिमा भरखरै एउटा तरङ्ग पैदा भयो तरङ्ग पैदा हुनुको कारण थियो नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले पृथकवादी सोच राख्ने सिके राउतसँग गरेको ११ बुदे…
आज विश्व महिला दिवस विभिन्न राष्ट्रहरुमा धुमधामका साथ विभिन्न नाराहरुका साथमा मानिरहेका छन् । २०१९ को महिला दिवस “सन्तुलनको लागि राम्रो” अथवा “बलांस फोर बेटर” भन्ने…
रवीन्द्र अधिकारीको दुर्घटना होइन सुनियोजित घटना हुन सक्छ !
– रबिन्द्र दाइको दुर्घटना होइन सुनियोजित ढंगले गराइको घटना हुन सक्छ । यो दुर्घटना नहुन सक्छ।
कारण हरु यी यी हुन सक्छन ।
1. लुम्बिनीमा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बनाएकोले गर्दा…
समृद्ध नेपाल निमार्ण गर्नको लागि डा.बाबुरामको उच्च भिजन
-वर्तमान युग विज्ञान प्रविधिको युग हो । विज्ञान प्रविधिको अदभुत आविस्कार गर्दा आजको विश्वमा हरेक दश वर्षमा विचारको संकटबाट गुज्रिरहेकाे छ । अहिले वैचारिक संकट वैश्वीक रुपमा देखिएको…